Ukungezwani komzimba nokudla - GAAPP
Ikhaya>Izinhlobo zokwaliwa komzimba>Izinkinga Zokudla
Izinkinga ZokudlaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-05-27T11:05:28+02:00
Abalinganiselwa ezigidini eziyi-15 baseMelika banenkinga yokungezwani komzimba nokudla, kufaka phakathi izingane eziyizigidi eziyisithupha.
Ukudla okuyisishiyagalombili i-akhawunti yamaphesenti angama-90 akho konke okwenzeka e-United States: ubisi lwenkomo, amaqanda ezikhukhukazi, amakinati, amantongomane ezihlahla, ukolweni, isoya, inhlanzi kanye ne-shellfish. Okunye ukudla abantu abaguliswa yikho kusuka ku-avocado kuya kuma-yam.
Ukungezwani kokudla okuningi izimpawu zimnene, kepha e-United States kuneziqephu ezingaba ngu-30,000 ezisongela impilo ezibangelwa ukudla i-anaphylaxis unyaka ngamunye, kuhlotshaniswa nokufa kwabantu abayi-150 kuya kwabangu-200. Ukuphela kwendlela efakazelwe yokuvimbela ukusabela okweqile ukugwema ukudla ongaxabani nakho, ngakho-ke ukuxilongwa okunembile kubalulekile.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ngaphezu kwengxenye yokungezwani komzimba nokungezwani kokudla akuyona neze i-allergies.
Kuthatha okungaphezu kokumbalwa kwe- ukuhlolwa komzimba ukwazi ngokuqinisekile. Ama-allergists aqinisekiswe yiBhodi anokuqeqeshwa okukhethekile kanye nesipiliyoni ekuhlanganiseni zonke izingcezu zomlando wakho, umlando wakho wezokwelapha kanye nezivivinyo zomzimba ukuze uthole ukuxilongwa. Ngaphezu kwalokho, manje sesinakho Imihlahlandlela Yokuxilongwa Nokulawulwa Kokungezwani Komzimba e-US (National Institutes for Allergy and Infectious Diseases, December 2010) enikela ngemininingwane ejulile ngalokho okusebenzayo nokungasebenzi uma kukhulunywa ngokungezwani kokudla.
Ungakwazi yini Ukuphuma Emalwinini Okudla?
Ezinye izingane zizokhipha ukungezwani komzimba nokudla kwazo ngokuhamba kwesikhathi, ikakhulukazi uma zingezwani nobisi, iqanda noma ukolweni. Akuvamile kakhulu ukukhipha ukungezwani komzimba namantongomane noma amantongomane ezihlahla, yize kusengenzeka.
Ukungezwani komzimba nokudla kubi kakhulu; ungalokothi uzame ukuziqapha wedwa. Hlela ukuhlela ukuhlolwa okujwayelekile nomzimba wakho ukuze uvuselele uhlelo lwakho lwezokwelapha.
Imininingwane evela kubalingani be-Allergy & Asthma Network: I-AllergyHome.org